DRC: စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဒီစနေနေ့ 24 သြဂုတ်လ - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဒီစနေနေ့သြဂုတ်လ 24 - အာဖရိက
- Tshisekedi နှင့် Sylvestre Ilunga အကြားအစည်းအဝေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မူလတန်းပညာရေးအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသတင်းအွန်လိုင်းမီဒီယာကင်ရှာဆာ၌ဤနံနက်တွေ့ရှိခဲ့လောင်စာသောကိစ္စများအကြားရှိပါတယ်။
ဘောလုံးကိုမဖွင့် CAS-INFO.CA Tshisekedi နှင့်ဖေလဇ်မင်း Sylvestre Ilunga နှင့်ခေါင်းစဉ်အကြားအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်: "Ilunga Ilunkamba နောက်ဆုံးတော့ Tshisekedi အားဖြင့်စနေနေ့လက်ခံရရှိမည်ဟုသမ္မတထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်"။ အများအပြားထင်မြင်ချက်ပြီးနောက်သမ္မတနောက်ဆုံးမှာ communicate ", ဒီ site ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့များအတွက်ကြေငြာခဲ့သည် Sylvestre Ilunga Ilunkamba ဖဲ Tshisekedi တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းစနေနေ့ကနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်ကပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကနေ tweet သည်နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးချိန်ညှိကြလိမ့်မည်။ "
7SUR7.CD တူညီတဲ့သတင်းကိုကြေညာခြင်း, အထူးအစည်းအဝေးကိုပရိုဂရမ်များ၏အကြားအာရုံနှင့်အစိုးရ Ilunga Ilunkamba ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲများအတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်ခေါ်ယူထားပြီး "အဲဒီပြန်ပြောပြသည်။ "
အဆိုပါကွန်ဂိုသတင်းအေဂျင်စီ (ACP) သတင်းအချက်အလက်သည် "သမ်မတနိုငျငံ၏သမ်မတ '' ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှစီးပွားဖြစ်ယာဉ်များကမ်းလှမ်း။ သောကြာနေ့ပေးအပ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဖေလဇ်မင်း Tshisekedi, ဝန်ထမ်း Kamerhe သူ့ရဲ့အကြီးအကဲ 26 Utility ကို ATVs မှတဆင့်ထို CPA ရေးသားခဲ့သည်။ တစ်ဦးကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အရေးပေါ်အစီအစဉ်ဖဲ Tshisekedi အောက်ရှိမော်တော်ယာဉ်များလည်းပါဝင်သည်သောသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမကြာမီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ဂီယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုအမြဲလက်နက်ချကြောင်းဖြည့်စွက် ACTUALITE.CD အားဖြင့်မျှဝေပေးတယ်။
ထို့ပြင်အခမဲ့မူလတန်းပညာရေးကိုကြည့်ရှုကြောင်း POLITICO.CD, မေးခွန်းပေါ်ပေါက်: အဆိုပါ DRC တွင် "အခမဲ့မူလတန်းပညာရေး: ဒဏ္ဍာရီသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်? ".
ဒါဟာမီဒီယာ Politico.cd Emery Okundji, EPSP ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းစဉ်အတွင်းမိဘများအတွက်အားလုံးကျောင်းလခ၏လွတ်လပ်သောမူလတန်းကျောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုအတည်ပြုခဲ့သည်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ "ဒီအခမဲ့၏ထိရောက်မှုကိုရုပ်လုံးပေါ်လာစေရန်, တစ်လှည့်လည်ဇယားသည် 2019-2020 ကျောင်းကတစ်နှစ်ကနေဒီအခမဲ့အခြေခံပညာရေး၏လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုအဖြစ်လက်တွေ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သတ်မှတ်ပေးဖို့ကင်ရှာဆာအတွက်ကြာသပတေးနေ့ဖွင့်လှစ် ။ "
ဒါပေမယ့်ဒီအွန်လိုင်းသတင်း site ကိုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနှင့်ဤ gratuity အတူလိုက်ပါရန်ဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါကျောင်းသားများ, သမ္မတနိုင်ငံတပြင်လုံးကိုတလျှောက်လုံး 5000 ကျောင်းများခြင်းဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အရာရှိတဦးကကိန်းဂဏန်းများလိုက်လျောညီထွေဖို့အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်အမျှ။ နောက်တဖန်အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းကဘာလဲ, နိုင်ငံတော်သမ္မတက၎င်း၏အစီအစဉ်တွင် 150 100 ရက်ပေါင်းအနီးရှိစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ရာထူးတိုး။ ဒီအတောအတွင်းအသစ်ကစာသင်နှစ်စက်တင်ဘာလ 02 ဘို့စီစဉ်ထားသည်နှင့် DRC တပြင်လုံးကိုပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း၏ဂတိအပေါ်ဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ်။ "
Dido အဘိဓါန် Nsapu
(မသိ / ဟုတ်ကဲ့)